Bladder control problem? in Burmese | Continence Foundation of Australia
Bladder control problem? in Burmese
ဆီး ထိန်းနိုင်မှု ပြဿနာ။
သင့်မှာ ဆီးထိန်းနိုင်မှု ပြဿနာရှိသလား။ မိမိဘာသာမိမိ စစ်ဆေးနိုင်သော မေးခွန်းလွှာကို ဖြေကြည့်ပါ။
မိမိဘာသာမိမိ စစ်ဆေးနိုင်သော မေးခွန်းလွှာ
ချောင်းဆိုးသည့်အခါ၊ ရယ်သည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် နှာချေသည့်အခါ ဆီး စိမ့်ထွက်သလား၊ သို့မဟုတ် စိုအောင်ထွက်သလား။
အလေးအပင် တစ်ခုခု ပင့်မသည့်အခါ ဆီး စိမ့်ထွက်သလား၊ သို့မဟုတ် စိုအောင်ထွက်သလား။
အားကစားလုပ်သည့်အခါ ဆီး စိမ့်ထွက်သလား၊ သို့မဟုတ် စိုအောင်ထွက်သလား။
ဆီးကိုစုပ်ရန် သို့မဟုတ် ‘လိုလိုမယ်မယ်’ ဂွမ်းဖတ်စများ ခံထားတတ်သလား။
အိမ်သာကို မကြာခဏ ကမန်းကတန်း ပြေးရလေ့ရှိသလား။
တစ်ခါတစ်ရံ အိမ်သာကို မရောက်သေးမီ ဆီးထွက်သွားတတ်သလား။
သင့် ဆီးအိမ် မထိန်းနိုင်မှာ သင် စိုးရိမ်စိတ် ရှိဘူးသလား။
အိမ်သာသွားရန်အတွက် တစ်ညလျှင် တစ်ကြိမ်ထက်မနည်း အိပ်ယာမှနိုးသလား။
အနီးဆုံး အိမ်သာကို အခြေပြုပြီး မိမိ၏ တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲရသလား။
တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ဆီးအိမ်မှာ ဆီးမကုန်သေးဘူးဟု ခံစားရသလား။
သင်မတ်တပ်ရပ်သည့် အခါ ဆီး စိမ့်ထွက်သလား၊ သို့မဟုတ် စိုအောင်ထွက်သလား။
သင်အိပ်ရာမှ ထလိုက်သည့်အခါ ဆီး စိမ့်ထွက်သလား၊ သို့မဟုတ် စိုအောင်ထွက်သလား။
အိမ်သာသွားပြီးချိန်တွင် ဆီး တစ်စက်တစ်စက် ထွက်နေသလား။
သင် ဆီးထွက်ခြင်းသည် ရပ်လိုက် ပြန်ထွက်လာလိုက် ဖြစ်သလား။
အိပ်နေစဉ် အိပ်ရာထဲတွင် ဆီးထွက်သလား။
အကယ်၍ ထိုမေးခွန်းတစ်ခုခုတွင် သင်က ဟုတ်ပါသည် ဟု ဖြေခဲ့လျှင် သင့်၌ ဆီးထိန်းနိုင်မှု အခက်အခဲ ရှိနေနိုင်ပါသည်။
ဆီးထိန်းနိုင်မှု မကောင်းဘူးဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။
ဆီးထိန်းနိုင်မှု မကောင်းသောသူများ၌ ဖေါ်ပြပါအချက်များ ဖြစ်နေနိုင်ပါသည် -
အမှတ်တမဲ့ ဆီးထွက်နိုင်ခြင်း၊ ဆီးစိမ့်ထွက်နိုင်ခြင်း။ ၎င်းကို ဆီးမထိန်းနိုင်မှု ဟုခေါ်ပါသည်။
ဆီးသွားရန် အိမ်သာကို အလောတကြီးရောက်အောင်သွားရန် လိုအပ်ခြင်း။
သူတို့ အိမ်သာကိုမရောက်မီမှာပင် ဆီးထွက်ကုန်ခြင်း။
တစ်နေ့တာတွင် အိမ်သာကို မကြာခဏ သွားရခြင်း။
သူတို့ ဆီးသွားရန် ညဘက်တွင် တစ်ကြိမ်ထက်မနည်း ထရခြင်း။
သူတို့ ကုတင် သို့မဟုတ် ကုလားထိုင်မှ ထသည့်အခါ ဆီးထွက်ကျခြင်း။
သူတို့ တစ်ခုခု ပင့်မသည့်အခါ၊ ရယ်သည့်အခါ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် နှာချေသည့်အခါ ဆီးထွက်ကျခြင်း။
သူတို့ ဆီးထွက်ကျပြီးနောက် ဆီးထွက်၍ထွက်မှန်း မသိကြပါ။
ဆီးပုံမှန် တစ်ဆက်တည်း လျှောလျှောလျှူလျှူ သွားရမည့်အစား ရပ်သွားလိုက်၊ ပြန်ထွက်လာလိုက် ဖြစ်နေခြင်း။
အိပ်နေစဉ် အိပ်ယာပေါ်တွင် ဆီးထွက်သွားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးထိန်းနိုင်မှု မကောင်းခြင်း မည်မျှအဖြစ်များသနည်း။
ဩစတြေးလျားနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီး ၃ ဦးတွင် တစ်ဦး၊ အမျိုးသား ၁၀ ဦးတွင် တစ်ဦးနှင့် ကလေး ၅ ဦးတွင် ၁ ဦး ဆီးထိန်းနိုင်မှု အခက်အခဲ ရှိကြပါသည်။
အကယ်၍ သင့်ထံ၌ ဆီးထိန်းနိုင်မှု အခက်အခဲရှိခဲ့လျှင် သင် တစ်ဦးတည်းသာ ဖြစ်နေခြင်း မဟုတ်ပါ။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အသက်အရွယ်အားလုံးတွင် ဆီးထိန်းနိုင်မှု မကောင်းခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့် အသက်ပိုကြီးသူများတွင် ပိုပြီး ဖြစ်ရန်အလားအလာရှိပါသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆီးထိန်းနိုင်မှု မကောင်းရသနည်း။
အားစိုက်မှုကြောင့် ဆီး မထိန်းနိုင်ခြင်း
တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများ (ပုံတွင်ကြည့်ပါ) သည် ဆီးအိမ်ထဲတွင် ဆီးကိုထိန်းထားရန် အထောက်အကူပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင့်တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများတွင် အင်အား မရှိခဲ့ပါက သင် ရယ်သည့်အခါ၊ ချောင်းဆိုးသည့်အခါ၊ သို့မဟုတ် နှာချေသည့်အခါ၊ ဆီးထွက်ကျနိုင်ပါသည်။ တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနှင့် မီးဖွားခြင်းတို့ကြောင့် အားလျော့သွားနိုင်သည်။ သင် တက်ကြွလှုပ်ရှားနေပါကလည်း ဆီးထွက်ကျနိုင်သည်။ သင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါက၊ အိပ်ယာမှထလိုက်ပါက သို့မဟုတ် မတ်တပ်ရပ်လိုက်ပါက ဆီးထွက်ကျနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဤကြွက်သားသည် အားပျော့နေပြီးဖြစ်ပါက အသက်ကြီးလာခြင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ရှိသင့်သည်ထက် ပိုများနေခြင်းတို့က ထိုကြွက်သားများကို ပို၍ပင် အားပျော့စေနိုင်ပါသည်။ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက သင် ဝမ်းသွားရန် ပိုမိုအားစိုက်ရန် လိုအပ်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့အားစိုက်ခြင်းသည်လည်း သင့် တင်ပါးဆုံခွက်ကြွက်သားများကို အားပျော့စေနိုင်ပါသည်။
အလုပ်လုပ်လွန်းနေသော ဆီးအိမ်နှင့် အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်း
ဆီးအိမ်ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ မလိုအပ်သည့်အခါတွင် ဆီးကိုတွန်းထုတ်ရန်အတွက် ကျုံ့ပေးနိုင်သော ကြွက်သားဖြစ်သည်။ အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်းဆိုသည်မှာ ဆီးသွားလိုစိတ် ချက်ခြင်းဆိုသကဲ့သို့ ပြင်းထန်စွာဖြစ်လာပြီး ထိန်းမရတော့ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ အလုပ်လုပ်လွန်းနေသော ဆီးအိမ်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်းသည် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဆွပေးခံရခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ဖြစ်နေပါက ကော်ဖီသောက်လျှင် သို့မဟုတ် အရက်သေစာ သောက်စားလျှင် ပို၍ဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။ အရည် လုံလောက်စွာမသောက်ပါက ဆီးသည် နံစော်၍ အရောင်ရင့်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ ဖြစ်လာပါက အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်းကို ပိုဆိုးသွားစေနိုင်သည်။ ဆီးအိမ်တွင် ရောဂါပိုး ကူးစက်မှု ရှိပါကလည်း အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။ လေဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြေလက်တုန်ပြီး ကိုယ်နေဟန်ချက်ကို မတည်ငြိမ်စေသော Parkinson’s disease သို့မဟုတ် multiple sclerosis ကဲ့သို့ နာတာရှည် နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါ ရှိလျှင်လည်း အရေးပေါ် ဆီးသွားလိုခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်လောက် အလုပ်မလုပ်သော ဆီးအိမ်
အချို့သောသူများသည် ကောင်းစွာကျုံ့ခြင်းမရှိသော ဆီးအိမ်ကြွက်သား ရှိတတ်ကြသည်။ သူတို့၏ ဆီးအိမ်သည် ဆီးကို ကုန်စင်အောင် မစွန့်ထုတ်နိုင်တော့ပါ။ ထိုသူများသည် ဆီးပုံမှန်သွားရန် အခက်အခဲရှိကြပါသည်။
ဆီးလမ်းကြောင်း (ဆီးပြွန်) တွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ခြင်း
ဆီးလမ်းကြောင်း (ဆီးပြွန်) ပေါ်တွင် သက်ရောက်သော မည်သည့်ဖိအားမျိုးမဆို ၎င်းကို ကျဉ်းမြောင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် ဆီးအိမ်မှ ဆီးထွက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းမှာ အမျိုးသားများတွင် ဆီးကျိတ်ကြီးနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သားအိမ်လျှောကျခြင်းသည် အမျိုးသမီးများတွင် ဆီးသွားခြင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။